Momba anay - Zhucheng Shenlong Masinina
Zhucheng shenlong factory factory, miorina amin'ny valan-javaboary changcheng, atsinanana mankany Qingdao huangdao, atsimo mankany rizhao, avaratra mankany weifang, andrefana mankany linyi, dia foiben'ny fitaterana an-tanety ao jiaodong, tena mety sy mandroso tokoa ny fifamoivoizana.
Zhucheng shenlong milina orinasa naorina tamin'ny 2004, nandritra ny folo taona mahery izay nifikitra tamin'ny tanjon'ny fandresena amin'ny kalitao, fahafaham-po ny mpanjifa toy ny fenitra kalitaon'ny vokatra. Andiam-pandrefesana fanamafisana kalitao mahomby ampiharina amin'ny dingan'ny famolavolana ny vokatra, ny famokarana ary ny fampiasana ny mpampiasa. Mametraha antontan-taratasy ho an'ny mpampiasa, mba hanomezana alalàn'ny mpampiasa serivisy aorian'ny fivarotana matihanina, haingana, tsara, hahazoana antoka fa tsy manana ahiahy ireo mpampiasa. Ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa mba hanome fitaovana arifomba, ka manahy ny mpampiasa, manangona fotoana, mitahiry ezaka, hamokarana vokatra tena tsara, ka ny vokatra malaza hatraiza hatraiza, ho tokantrano an'arivony, no tanjonay; Andraikitry ny orinasam-pamokarana ihany koa io.
Zhucheng Shenlong Masinina Factory dia iray amin'ireo mpamokatra lehibe ho an'ny mari-pana avo lenta sy reture presure ary kettle vita amin'ny jacky any Shina. Izahay dia tena mamokatra rano mandeha ho azy, famonoana rano / famonoana rano, familiana rotary. ary ketôta miakanjo. Ny vokatray dia mety amin'ny orinasa sinoa sy avy any ivelany ary ireo karazana mpamokatra sakafo sy zava-pisotro rehetra. Ankoatr'izay, ny masininay dia amidy manerana ny firenena ary aondrana any amin'ny tany atsimo rosiana, atsinanana atsinanana, sns. Ny masininay dia ampiasaina amin'ny karazan-tsakafo am-bifotsy rehetra, toy ny vokatra hena feno entana, vokatra vita amin'ny ronono, tsaramaso. atody. zava-pisotro sns.
Shenlong Masinina Factory manana ny teknolojia sterilization manokana sy ny rafitra fiantohana kalitao tonga lafatra. Ho an'ny fifehezana mandeha ho azy ny solosaina dia tonga amin'ny ambaratonga avo lenta iraisam-pirenena isika. Ankoatr'izay, ny rafitra fanaraha-maso ataontsika dia afaka mifehy tsara ny tsindry sy ny mari-pana mandritra ny fizotrany, ary mampiseho ny fizotrany manontolo ary manoratra ny mari-pana sy ny T-Tcurve. Ankoatr'izay, afaka mamonjy mihoatra ny zotra sterilization 100 mahery ho an'ny vokatra samihafa izy. Azontsika atao ihany koa ny mandrafitra ny fitsapana fizarana hafanana ary manome fototra ara-tsiansa amin'ny famakafakana ny fizotran'ny fanamorana.
Shenlong Machines Factory dia nifikitra hatrany tamin'ny lalànan'ny orinasanay "ny kalitaon'ny fahavelomana, ny fahatokisana ny fampandrosoana, ny fitantanana tombony, tohanan'ny serivisy", ary nifikitra tamin'ny foto-kevitry ny "People-oriented, mpanjifa toy andriamanitra" .Koa, manantena fatratra amin'ny fiaraha-miasao !!
Zava-dehibe ny kalitao, antoka ny serivisy, miompana amin'ny olona orinasa. Manaraka ny "kalitao kalitao, kalitao handresena ny tsena" finoana, ny fananganana rafitra antoky ny kalitao sy ny serivisy serivisy aorian'ny varotra, hanomezana ny mpanjifa asa fanompoana aorian'ny varotra mahafa-po, vonona ny mpamokatra mpiara-miasa sy ivelany ary vahiny olona hametraka fifandraisana isan-karazany amin'ny fiaraha-miasa.
Zhucheng shenlong orinasa mpamokatra milina shenlong dia mandray tsara ireo mpanjifa vaovao sy taloha hitsidika fitarihana, fifampiraharahana amin'ny orinasa.
Shenlong sterilization vilany (brochure)